आज मिति २०७४ साल चैत्र महिनाको १४ गते तदनुसार मार्च २८ तारिक - Darpanpost
» राशिफल अंक: 9068
आज मिति २०७४ साल चैत्र महिनाको १४ गते तदनुसार मार्च २८ तारिक
मेष – आर्थिक समस्याले दिन भरि तनाव हुनुका साथै साथीभाईको सहयोग मिल्नेछ । सवारीसाधनबाट भने आज होसियार हुनुहोला , शुभ अकं १ रातो रगं उत्तर दिशा शुभ रहेकोछ ।
बृष – स्वास्थ्यमा ख्याल नगर्दा केहि महत्व पुर्ण कार्यमा नोक्सानी हुनसक्छ । यात्रा रमाईलो हुनेछ भने शैक्षिक पक्षमा खासै प्रगति हुने छैन् । शुभ अकं २ सेतो रगं पुर्व दिशा शुभ रहेकोछ ।
मिथुन – शत्रुहरुले सताउने छन् , परिश्रम गरे अनुसारको फल भने मिल्ने छैन् । बैदेशिक यात्रा रमाईलो तथा स्वास्थ्यमा भने ख्याल गर्नुहोला , शुभ अकं ३ कालो रगं दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ ।
कर्कट – सन्तानले कष्टदिनेछन् । आम्दानीमा कमी हुन सक्छ । वैदेशिकयात्रा नराम्रो हुनेछ । धेरै योजनाहरु बन्नेछन् । परिवारले साथदिने छैनन् । शुभ अक.९ पहेलो रगं दक्षिण दिशा शुभरहेको छ ।
सिंह — शैक्षिक स्तरमा सफलता एवं वैदेशिक कार्यबाट लाभमिल्ला ,राज्नीतिमा खासैराम्रो छैन् ,स्मरण शक्तिमा कमि आउने छ । शुभ अकं ३ रगं रातो पश्चिम दिशा शुभरहेको छ ।
कन्या — शारीरिक पीडा आउने छ । नयाँ कामको सु्रुवात हुने छ । व्यापारमा सफलता,शैक्षिक प्रगति,लाभदायिकयात्रा एवं पारिवारीक समस्या आउन सक्छ । शुभअकं ५ , निलोरगं ,दक्षिण दिशा शुभरहेको छ ।
तुला — पशुचौपायबाट फाइदा मिल्नेछ । स्थान परिवर्तन तथा जागिर ,व्यवसाय एवं बैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रै हुने छ । शुभ अक. ,४ सेतोरगं , पुर्वदिशा शुभरहेको छ ।
बृश्चिक – मानसिक तनावहरु आउने छ , विश्वास पात्रबाट घातहुने , शैक्षिकप्रगति , सवारी दुर्घटनाहुने , पराक्रममा बृद्धि तथा साँस्कृतिक कार्यमा सहभागी ,शुभ अक. ,८ हरियो रग. ,उत्तर दिशा शुभरहेको छ । ं
धनु– यात्रामा केहि शारिरिक समस्या आउन सक्ने हुदाँ विचार गरेर मात्र यात्रागर्नु होला ,शैक्षिक क्षेत्रमा खासैरुचि देखिदैन ,आर्थिक संकटबाट छुटकारा मिल्ने छ , आजको लागी शुभं अकं ७ शुभ रंग पहेलो ,पश्चिम शुभ दिशा हुनेछ ।
मकर – दाम्पत्यजिवनमा तनाव, आँखाको समस्या ,कृषिबाट फाइदा मिल्नेछ ,यात्रामा कष्टहुने छ शत्रुपक्ष पराजित हुने छन् । विद्याआर्जमा कमी माया प्रेमकोप्रसंग मात्र चल्ने छ । शुभअकं १ , पश्चिम दिशा र सेतो रगं शुभ रहेको छ ।
कुम्भ – बोलिमा विचार पुराउनुहोला ,व्यापारमा नोक्सानी हुनेछ , विरोधीहरु सक्रिय हुनेछन् । मानप्रतिष्ठामा आँच आउने छ । शुभ अकं २ सेतो रगं , उत्तर दिशा शुभ रहेकोछ ।
मिन – खर्चमा वृद्घि भएता पनि आम्दानीले पुरा गराउने छ भोजभतेरमा सहभागी हुनु पर्ने छ । शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्यमा समस्या । शुभ अकं ६ निलो रगं र पुर्वदिशा शुभरहेको छ ।
ज्योतिषाचार्य प्रेम प्रसाद पराजुली